Aisakwanisa Kurisiya Pasi! | Marina Kopaliani
AKABEREKWA MUNA 1957
NHOROONDO YEUPENYU Iye nemurume wake, Badri, vakava vaparidzi vanoshingaira, ukuwo vachirera vanakomana vavo vaviri. Badri aiva mudare raiona nezvebasa reZvapupu munyika yacho uye akaramba akatendeka kusvikira paakazofa muna 2010.
MUNA 1989, ini nemurume wangu takasangana neZvapupu pamba pemumwe muvakidzani wedu. Hama Givi Barnadze, avo vaidzidza Bhaibheri nemuvakidzani wedu, vainge vasina Bhaibheri ravo nekuti zvainge zvakaoma kuwana maBhaibheri muGeorgia panguva iyoyo.
Takanakidzwa nezvatakadzidza uye taitoda kutsvaga Bhaibheri. Murume wangu paakaonana nemukoma wake, akabva amuudza kuti aitsvaga Bhaibheri. Murume wangu akashamisika paakanzwa mukoma wake achiti akanga abva kutenga Bhaibheri rechiGeorgian uye kuti aigona kumupa Bhaibheri iroro sechipo.
Badri paakadzoka kumba, akabva agara pasi ndokuti sika kuverenga Bhaibheri riya kusvikira hwava usiku. Zuva rakatevera racho akamuka ndokusimudzira kuriverenga. Pandakasvika kumba ndichibva kubasa, ndakamuwana achiri kungoriverenga. Aisakwanisa kurisiya pasi! Saka ndakamubvunza kuti zvaisaita here kuti ambokumbira kusava pabasa kwetwumazuva kuitira kuti apedze kuriverenga. Munguva pfupi ainge atoriti tsvai.
Patakazotanga kudzidza bhuku raZvokwadi Inotungamirira Kuupenyu Husingagumi naHama Barnadze, taifara kuti takanga tava neBhaibheri reduwo. Zvakabva zvatonakawo kuti munhu aitidzidzisa aiva nebhuku raZvokwadi uye isu taiva neBhaibheri! Pashure perinenge gore, ini naBadri takabva tabhabhatidzwa.